UDaniyeli Nomngxuma Oneengonyama | Izifundo ZeBhayibhile Zabantwana
Omnye ukumkani waseBhabhiloni yayinguDariyo umMedi. UDariyo wabona ukuba uDaniyeli wayengafani nabanye abantu. Wathi makaphathe awona madoda abalulekileyo aseBhabhiloni. La madoda aba nomona, afuna ukumcim’ igama uDaniyeli. Ayesazi ukuba uthandaza kuYehova kathathu ngemini, ngoko athi kuDariyo: ‘Kumkani, ufanele ubeke umthetho othi wonke umntu umele athandaze kuwe. Nabani na ongawuthobeliyo loo mthetho makaphoswe emngxunyeni oneengonyama.’ UDariyo wayithanda le nto, waza wawumisela nyhani loo mthetho.
UDaniyeli wathi akuva ngalo mthetho mtsha, waya endlwini yakhe. Wafika waguqa phambi kwefestile evuliweyo, wathandaza kuYehova. Amadoda anomona angena egibiseleka, afika ethandaza. Abaleka aya kuDariyo, athi: ‘UDaniyeli akakuthobeli. Uthandaza kuThixo wakhe kathathu ngemini.’ UDariyo wayemthanda uDaniyeli engafuni ukuba afe. Yaphel’ imini ecinga indlela anokumsindisa ngayo. Kaloku, nakuba umthetho wokuphoswa komntu emngxunyeni oneengonyama wawumiselwe nguye, wayengenakukwazi ukuwutshintsha. Kwafuneka ayalele amadoda akhe ukuba aphose uDaniyeli emngxunyeni oneengonyama.
Ngobo busuku uDariyo wayekhathazeke kakhulu ecinga ngoDaniyeli, kangangokuba zange behle ubuthongo. Kwakusa, wabaleka waya emngxunyeni awayephoswe kuwo uDaniyeli, wamkhwaza esithi: ‘Daniyeli, uThixo wakho ukusindisile?’
Weva ilizwi likaDaniyeli lisithi: ‘Ingelosi kaYehova iyivalile imilomo yeengonyama. Azindenzanga nto.’ Wavuya kakhulu uDariyo, wayalela ukuba uDaniyeli akhutshwe. Wayengenawo nomkrwelo. Ukumkani wathi: ‘Phosani amadoda atyhole uDaniyeli kwezi ngonyama.’ Athi akuphoswa, iingonyama zazenzela.
UDariyo wakhupha lo myalelo: ‘Wonke umntu makamoyike uThixo kaDaniyeli. Umsindisile kwiingonyama.’
Wena, uthandaza yonke imihla njengoDaniyeli?
“UYehova uyakwazi ukubahlangula esilingweni abantu abanozinikelo lobuthixo.”—2 Petros 2:9
Imibuzo: Yintoni awayeyenza kathathu ngemini uDaniyeli? UYehova wamsindisa njani?
Nceda abantwana bazi ukubaluleka kokuthandaza kuThixo imihla ngemihla.